Dheeraynta sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon / Sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah / Dheeraynta sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 8 10 2021
Marka sharcigaaga deganaansho ee ku meel gaarka ahi sii dhamaanayo waxaad fursad u haysataa inaad codsato dheeraynta. Waxaad heli kartaa sharciga deganaansho oo laguu dheereeyay haddii weli aad u baahantahay gabood. Xaaladaha qaarkood waxaad xitaa heli kartaaa sharci deganaansho haddii aad haysato sababo kale oo ah inaad joogto Iswiidhan.
Goorma ayay tahay in la codsado dheeraynta sharciga deganaansho?
Waa khasab inaad codsato dheerayntaka hor intaan sharcigaaga deganaansho ee ku meel gaarka ahi dhicin. Ugu horeyn laba bilood ka hor intaan sharcigan dhicin ayaad codsan kartaa dheerayn.
Codsiga ka sameee bogga intarnatka ee Hey'adda Socdaalka
Bogga Hey’adda Socdaalka waxaa laga helayaa adeeg elaktaroonig ah oo loogu talogalay in laga codsado dheereynta sharciga deganaanshada. Adeeggan wuxuu jiraa isagoo ah Iswiidhish iyo Ingiriisi. Waa inaad ku gasho Aqoonsiga-Bangiga.
Akhri dheeraad ku saabsan dheeraynta sharciga deganaansho oo ku qoran bogga Hey'ada Socdaalka.